Wadahadaladii Farmaajo & Rooble Oo fashil Ku Dhamaaday – MIDNIMONEWS
Warar soo baxayay saacadihii u dambeeyay ayaa muujinaya in ay guuldareysteen dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo iyo Raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
“Dadaal badan oo uu bixiyay Madaxweynaha Galmudug oo marxalado badan soo maray iyadoo xiliyada qaar ay shirarku qaadanayeen ku dhawaad 18 saac, ayaa gunaanadkii wuxuu caawa kusoo dhamaaday fashil,”ayuu ku yiri qoraal uu wasiirka Galmudug soo dhigay Facebook, qoraalkaas oo ay sii faafiyeen Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Maclin Fiqi iyo dad kale.
Wasiirka madaxtooyada Galmudug ayaa sidoo kale dhaliilay xafiiska madaxweynaha, oo ku sheegay in ” lagala kulmay caqabad”.
Xiriir ay BBCdu la sameysay xafiiska madaxweynaha, kuma aynan guuleysan in aan falcelin ka helno.
“Iyadoo Raysal Wasaare Rooble garabkiisa ay muujiyeen biseyl badan halka dhinaca kalena lagala kulmay caqabad aad u waaweyn oo soo dadajisay inuu wada hadaladii socday caawa ay istaagaan,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Cumar Shido.
Khilaafka madaxwayne Maxamed Cabdulahi farmaajo iyo Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa bilaabmay ka dib markii uu rai’sul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimihii hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji daahir.
Tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeedsaday madaxwayne Farmaajo oo shirci daro ku tilmaamay islamarkana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad-sugidda Yaasiin fareey.
Labada masuul ayaa sidoo kale isku maan-dhaafay xil ka qaadistii wasiirkii amniga Xasan Xundubeey iyo magacaabidii uu rai’sul wasaaraha u magacaabay Cabdulahi Maxamed Nuur wasiirka amniga.
Balse dulucda iyo xuddunta khilaafka ayaa ahaa arrinta Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay’dda nabad sugidda oo la sheegay in Shabab ay dileen.
Al-shabab ayaaa dhankooda beeniyay warkii lagu daabacay warbaahinta dowladda ee ahaa in Ikraan ay iyaga afdubteen ka dib-na ay dileen.
Caddaalad u raadinta Ikraan iyo waddada loo marayo ayaa noqotay mid uu khilaaf xooggan ka dhasho.
Previous Boqor Salman oo caalamka u diray farriin ku Wajahan Iran
Next Madaxweyne Geelle oo warbixin ka siiyay Qaramada Midoobay xaaladaha Soomaaliya iyo Itoobiya